အာဖဂန် ပြည်သူ တွေကို တာလီဘန် တွေ ခေါင်းဖြတ် သတ် | Freedom News Group
အာဖဂန် ပြည်သူ တွေကို တာလီဘန် တွေ ခေါင်းဖြတ် သတ်
by FNG on August 27, 2012	အာဖဂန် နစ္စတန် တောင် ပိုင်း ဟယ်(လ) မန် ပြည် နယ် က ၀ါရှီယာ ခရိုင် မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ က
ကျင်း ပတဲ့ ပါတီ ပွဲ တစ် ခုမှာ လာရောက် ကခုန် သီဆို နေ ကြ တဲ့ အပြစ် မဲ့ အာဖဂန် နစ္စတန်
ပြည် သူ ၁၇ နှစ် ဦး ကို တာလီဘန် တပ် သား တွေ က ရက် ရက် စက် စက် ခေါင်း ဖြတ် သတ်
ပစ် ရာ မှာ အပြစ် မဲ့ အမျိုး သမီး နှစ် ဦး ပါ ပါ ၀င် တယ် လို့သိရ ပါတယ်။
ဒီ ဒေသ ကို တကျော့ ပြန် စိမ့် ဝင် လာ တဲ့ တာလီဘန် တွေ ဟာ ပြီး ခဲ့ တဲ့ ရက် သတ္တပတ် အတွင်း
ဒီဒေသ မှာ တိုက် ခိုက် မှု တွေ ဆက် တိုက် လုပ် လာ ခဲ့ ပြီး မနေ့က တနင်္ဂနွေ နေ့တစ်နေ့ တည်း
မှာ ပဲ နေ တိုး တပ် ဖွဲ့နှစ် ဦး အပါ အ၀င် အရပ် သား တွေ ကို တိုက် ခိုက် ခဲ့ ပါတယ်။
နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဒေသ မှာ သေဆုံး ခဲ့ တဲ့ ၂ ဦး ဟာ တာလီဘန် စစ် သား တွေ က စစ်သား ဒါမှ
မဟုတ် ရဲအယောင် ဆောင် ပြီး တိုက် ခိုက် မှု တွေ ထဲ က သေဆုံး ပြီး ခဲ့ တဲ့ မဟာမိတ် တပ် သား
၄၂ ဦး ထဲ က တစ် ဦးဖြစ်ပါတယ်။
၀ါရှိ ယာခရိုင် အုပ် ချုပ် ရေး အာဏာ ပိုင် တွေ က တော့ ဒီ တိုက် ခိုက် မှု တွေ ကို ဘယ်သူ က လုပ်
ဆောင် တယ် လို့တရား ၀င် ထုတ် ပြော မထား သေး လို့အရပ် သား တွေ ကို ခေါင်းဖြတ် သတ် မှု
နောက် ကွယ် မှာ တာလီဘန် ပဲ ရှိ တာ လား ၊ ဘယ်သူ ရှိ နေ တာ လဲ ဆို တာ ကို ဆက် လက် စုံ
စမ်း ဆဲ လို့ဆို ပါတယ်။
ဘာသာရေး အစွန်း ရောက် တာလီဘန် တပ် ဖွဲ့ဟာ အမျိုး သမီး တွေ ပါတီ ပွဲ လန်း သဘင် မှာ
မသင့် လျှော် ဘူး ဆို တဲ့ အမြင် ရှိ ပွဲ ပွဲ လန်း သဘင် လုပ် ပြီး သီ ဆို က ခုန် တာ ကို လည်း မနှစ်
မြို့ တာ ကြောင့် ပါတီ ပွဲ ကို ၀င် ရောက် စီး နင်း စဉ် သူ တို့ဖမ်းဆီး ရ မိ တဲ့ လူ တွေ ကို ရက် ရက်
စက် စက် ခေါင်း ဖြတ် သတ် ပစ် တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီ ကျင်း ပ ရာ မူဆာ ကာလာ ရွာ နား မှာ ရှိတဲ့ ကို တော တွင်း တစ်နေ ရာ ခေါ် ဆောင်ကာ ပါတီ ပွဲ လာတဲ့
သူတွေ နဲ့ အမျိုး သမီး ကချေ သည် နှစ် ဦး သတ် ပစ် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး တနင်္လာ နေ့က
အလောင်း တွေ ကို တွေ့ ရှိ ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ပြီး ခဲ့ တဲ့ ရက် ပိုင်း အတွင်း မှာ ပဲ အာဖဂန် နစ္စတန် မှာ ခြေ စိုက် တဲ့ အမေရိကန် တပ် ဖွဲ့ဝင် တွေ
ရဲ့မောင်း သူ မဲ့ လေယာဉ် နဲ့တိုက် ခိုက် မှု အတွင်း မှာ တာလီဘန် ခေါင်း ဆောင် အချို့နဲ့ဟာ
ကါနီ ကွန်ယက် က တပ် မှုး တွေ သေဆုံး ခဲ့ ကြ ပါတယ်။
ညွန့် ပေါင်း တပ် တွေ က ဖမ်းဆီး ရ မိ တဲ့ တာလီဘန် တိုက် ခိုက် ရေး တပ်သားတွေ AFP PHOTO/ JANGIR (Photo credit should read JANGIR/AFP/GettyImages)
From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၂၇.၈.၁၂) မှ ( ၂.၉.၁၂) အထိ တပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
ကျပ်ငွေ ၅၀၀၀ တန်အတု သိန်း ၁၅၀ ကျော်သိမ်းဆီးရမိ →
Htay Win	#
Thanks for valuable up date news and weekly statement for fortune.
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	Myanmar News in EnglishUN: Poverty pushing Myanmar opium output higherUS blacklists Myanmar firms for NKorea arms tradeU.N. agency says Myanmar, Golden Triangle opium cultivation jumpsUS blacklists Myanmar firms for arms trade with N.KoreaMyanmar's MPs lack resourcesMyanmar's women boxers land blows for equalityMyanmar Emerges From the ShadowsSoccer-Myanmar's fans riot after Southeast Asian Games knockout27 th Myanmar SEA Game Opening Ceremony Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,614,561 hits